Maxaa ku dhacay Top40 Geospatial on Twitter - Geofumadas
Janaayo, 2015 Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs
Lix bilood ka hor Waxaan dib u eegis ku samaynay koontada twitter twitter, ee liis ah oo aan ugu yeerno Top40. Maanta waxaannu cusboonaysiinnaa liiskan liiskan, si loo arko wixii dhacay intii u dhaxaysay May 22 iyo dhammaadka Diisambar 22 ee 2014. Dhammaan, 11 waxay ku qoran yihiin Ingiriis, laba af Portuguese iyo inta kale ee Isbanishka.
Dusha sare ee 10 Geospatial
Laga soo bilaabo wadarta xisaabaadka 40 ku dhow, adoo adeegsanaya garaafka gaaban, waxaad arki kartaa in isgoysku ka soo baxay 14,000 ilaa 16,000.
Isbeddelka ugu xiisaha badan ee 10 top this muujiyey garaafka hoose, halkaas oo% 75 ka kooban yahay lix dacwadood, taasoo ka dhigeysa saddex la haray% 25, ka mid ah kuwaas oo @geofumadas iyo @directionsmag in ay xaq yihiin oo ku trendline ee xariiqa qallooca ayaa jibbaaranaha.
Sawirka cusub ilaa Diisambar 2014:
Tani waxay ahayd sawirkii hore, halkaas oo aad ka arki karto in xisaabaadka 8 kaliya lagu taxay halkan; hadda waxay yihiin 9.
3 ka mid ah kuwan soo jeedo Saxon (calaamadeeyay cas) halka il Portuguese (calaamadeeyay in green), ka dibna waxaa jira saddex asal Hispanic, sida hore loo sharxay, Engineering Network iyo BlogIngeniería run ahaantii ma aha qayb gaar ah geospatial laakiin ay yihiin bartilmaameed ka mid ah xisaab in koraan karaa tartan.
Mayo 2014 Account - Diisambar 2014
2 ayaa si sax ah u socota, iyadoo si isku mid ah looga soocay safka intiisa kale:
Ka tegidda garaafka kala soocaya xisaabaadka 8 ee ugu horreeya, waxaanu leenahay garaaf cusub kaas oo aan kala sooci karno afar kooxood, ka bilaw si kaamil ah Esri_Spain. Isgoyska ayaa ku soo booday 5,200.
Kuwa soo socda waa garaaf hore.
Haddii garaafka la mid ah sida furfurista, waxaan arki aragti dheeraad ah oo wakiil ka ah waxa in this collection of xisaab 27, 25% in qaybaha aynu u qayshanno kasta Q1, Q2, Q3 iyo Q4:
Midka xigta waa sawir hore
Qeybtaani waxay haysaa sedex xisaabood oo isku mid ah. Metalaysa ku ururtay 25% ka mid ah dadka taabacsan, isagoo Esri Spain waa account kaliya ee aan ku jiraan software, isagoo tixraac xiiso leh waaxda geospatial.
isbedelka ku dhacay qeybta this, waa iridda @geoinformatics ka dib markii @geofumadas boodi si top10, oo @geoinformatics1 galo liiskan.
Q2: Xisaabaadka 6
qeybta Tani lahaa ka hor inta xisaab 5; Haatan waxa ay yihiin 6, saddex ka mid ah yihiin Ingiriis. Waxaan u aragnaa dhaqdhaqaaqyo xiiso leh, gaar ahaan @mappinggis qaadataa kaalinta koowaad, iyo xaaladood oo @nosolosig boodayaa meel si 21 15, @gim_intl iyo @Geoactual. saddex Kuwaasu waxay ahaayeen horay in Q3.
Sida aan u sheegnay, waxqabadka yar ee @orbemapa wuxuu u dhacey Q3.
In gabal sii xisaab 7, inkastoo dhowr dhaqaaqdo: @NewOnGISCafe iyo @gisandchips ilaa Q4 si Q3. @comunidadign waxay ku dhacdaa Q4.
Liiskani wuxuu noqon karaa mid aan qarsoodi lahayn, xisaabtana waxaa ka mid ah taageerayaasha 500 ilaa 1,700. Waxaan kaliya ku dari karnaa xisaabinta MappingInteract, maaddaama aan ku wareeray xisaabtaada Isbaanishka @revistamapping; inta soo hartay ayaa la mid ah sidii hore. Dhamaan kuwan oo dhan, hal kaliya waa Ingiriisi. Waxaa sidoo kale jira Catalan.
32 @PortalGeografos 1,259 - 1,274
Waxaan ku darnay xisaabta @geoinquiets liiska, ee xNUMX
Sida tixraac la cusbooneysiiyey waxaan ka tagaynaa horumarinta juquraafiga ee xisaabta Geofumadas, oo ku salaysan shaxanka FollowerWonk:
Tani waxay ahayd Diisambar 2012, markaan hal xarig ka sarreeyaa oo ka sarreeya taageerayaasha 100 ee ku yaala meso america iyo mid ka mid ah Spain oo ka sarreeya 400. Noodhyada casaanku waxay u taagan yihiin tobannaanka iyo caleenta buluuga ah ee matalaya 10.
Tani waa khariidadda Mayo ee 2014. Iyada oo ay ku taallo Spain, labo ka mid ah Mareykanka, mid ka mid ah Mexico iyo saddex ka mid ah South America oo ay ku jiraan mid ka mid ah Brazil.
Ilaa bisha December ee 2014, barta sare ee Spain ayaa loo qaybiyay labo noodbees cas, oo laga yaabo inay korodho akhristayaasha Anglo-Saxon. Intii Ameerika ah, qaybaha ayaa dib loo habeeyay aagga Mesoamerican.
Post Previous«Previous Ma aha isku mid. Kala duwanaanshaha khariidadaha hore iyo khariidadaha taariikhiga ah
Post Next Nidaamka Macluumaadka Juqraafi: videos 30Next »
2 jawaabta "Maxaa ku dhacay Top40 Geospatial on Twitter"
Waad ku mahadsan tahay soo-jeedinta. Waxaan ku darnay liiska. In kasta oo aanan cusboonaysiin shaxda.
RAF isagu wuxuu leeyahay:
cajiib ah liiskaaga ma muuqato kootada aad u firfircoon sida @geoinquiets